Midowga Musharixiinta oo War kulul kasoo saaray xaaladda dalka - Awdinle Online
Midowga Musharixiinta oo War kulul kasoo saaray xaaladda dalka
Xubnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha oo Galabta ilaa Caawa kulan la yeeshay Ururada Bulshada rayidka ah ayaa waxaa ay si aad ah uga hadleen shirkii natiijo la’aanta ku dhamaaday ee ka qabsoomay Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Dowlad Goboleedka.
Musharixiinta ayaa walaac ka muujiyay xaalada dalka, iyaga oo sheegay in shirka Dhuusamareeb ay rajo badan ka qabeen inay wax wanaagsan kasoo baxaan, hayeeshee uu fashil ku dhamaaday.
Maxamed Cabdiraxmaan Siiriin oo kamid ah Midowga Musharixiinta Madaxweynaha ayaa sheegay in inay nasiib darro tahay in aan la ogeyn xaaladda dalka iyo sida ay noqon karto maadaama muddo xileedka Madaxweyne Farmaajo ay Beri kaliya inaga xigta.
Musharax Siiriin oo Warbaahinta kula hadlay Muqdisho waxaa uu sheegay in madaama aan ilaa iyo hadda heshiis buuxa laga gaarin doorashada dalka, gaar ahaan shirkii Dhuusamareeb ay waajib noqotay in ay la tashi kula noqdaan qeybaha kala duwan ee bulshada.
Walaac badan ayaa laga muujinayaa sida ay noqon karto xaaladda dalka maadaama muddo xileedka Madaxweynaha Soomaaliya uu dhamaaday, iyada oo weli aan heshiis laga gaarin Arrimaha doorashooyinka dalka.
Next articleDhimasho iyo dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay Muqdisho